Ahoana ny fiasan'ny Laser faharoa Pico
Mampiasa ny vokatry ny fipoahan'ny laser Pico faharoa, izay mivoaka amin'ny alàlan'ny epidermis ao anaty dermis misy ny pigment pig. Ny pulses laser amin'ny nanosecond, angovo avo lenta. Izany dia miteraka fivontosan'ny pigmenta vetivety ary mivaky kely, izay esorina amin'ny alàlan'ny rafitra metabolika ao amin'ny vatana.
Pico Faharoa Laser tombony
☀Faharetan'ny angovo mahery & fitifirana
Ny herinaratra dia mivoaka amina miliara segondra ho an'ny tavy hoditra, izay afaka mizaha ny pigmenta ho faribolana kely kokoa noho ny Q nentim-paharazana: laser switch. Ny sombin-pigmenta dia azo entina mora foana sy haingana kokoa
RiskNy risika farany ary kely ny fanaintainana
Koa satria nahena ny fe-potoana pulse, dia tsy dia simba ny hoditra. Ny fitsaboana dia azo antoka kokoa ary tsy misy fanaintainana
Ho an'ny fanesorana ny tatoazy, matetika ny fitsaboana 6-8 dia ilain'ny nentin-drazana Q: switch laser. Amin'ny laser faharoa pico, fitsaboana 3-4 ihany no ilaina raha tsy amin'ny fanesorana tanteraka.
Ny fanesorana tanteraka ny tatoazy sy ny pigment dia azo atao amin'ny teknolojia faharoa Pico
Pico Faharoa Laser nafarana
Talohan'izay sy aoriana
Teo aloha: Zimmer rivotra mangatsiaka ho an'ny milina hatsaran-tarehy milay
Manaraka: Masinina mampihena ny vatana - Cryolipolysis, Coolsculpting
2021 Professional Pico 755nm Picosecond Laser T ...
Masinina Picosecond Laser Tattoo Fanesorana hoditra Wh ...
Shr Ipl Opt, Masinina mpanentana hozatra Ems, Laser estetika Co2, Co2 Laser Laser miato, fanesorana ny holatra, Fanesorana volo Shr Opt Ipl,